Maxay tahay Ujeedka laga leeyahay Ciidamada DF Somaliya ee maanta laga dejiyay magaalada Dhuusamareeb? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxay tahay Ujeedka laga leeyahay Ciidamada DF Somaliya ee maanta laga dejiyay...
Maxay tahay Ujeedka laga leeyahay Ciidamada DF Somaliya ee maanta laga dejiyay magaalada Dhuusamareeb?
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud, ayaa sheegaya in maanta halkaasi la geeyay Ciidamo ka tirsan dowladda Federalka Soomaaliya oo lagu geeyay diyaarado.
Ciidankaan ayaa laga qaaday Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, waxaana laga dajiyay Garoonka Magaalada Dhuusamareeb oo ay gacanta ku hayaan Ciidamada Danab ee Militariga Soomaaliya.
Ciidamadan ayaa isugu jira Boolis iyo Koofi gaduud ka tirsan dowladda Federalka Soomaaliya, waxaana la sheegayaa qorshaha loo geeyay Magaalada Dhuusamareeb inay tahay suggida ammaanka Shirka Magaalada Dhuusamareeb.
Ciidankaan la geeyay Magaalada Dhuusamareeb, ayaa ku soo aadaya iyadoo Ahlu Sunna ay diidaneyd Ciidamo in la geeyo Magaaladaasi, islamarkaana ay soo saareen qoraal arrintaasi ay kaga digayaan.
Dowladda Federalka Soomaaliya ayaa iska indha tireysa baaqyada kala duwan ee ka soo baxaya Ahlu Sunna, islamarkaana go‘aansatay in Magaaladaasi lagu daabulo Ciidamo ka tirsan dowladda.
Si kastaba, lama oga sida Ahlu Sunna ay uga fal celin doonaan Ciidamadan ka tirsan dowladda Federalka Soomaaliya ee la geeyay magaaladaasi, kuwaasi oo sida muuqata aanan lagala tashan Madaxda Ahlu Sunna.
laga dejiyay garoonka dhuusamareeb
xaalada oo kacsan
axmed August 25, 2019 At 21:45
Waa qorshaha Kacaanka Geeska , dowladu waxayisku deyeysaa inay wadanka gacan bira ku qabato, waase hadeyawoodo, wax xuna ma aha hadey hirgeli karto. bal waan sugeynaa.